Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Filibiin News » Madaxweynaha Filibiin oo ka baxay siyaasadda
Waxaa muhiim u ah Duterte inuu yeesho qof daacad u ah oo isaga ka ilaaliya tallaabada sharciga ah - guriga ama Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah - kumanaan dilal dowladeed oo ka dhan ah dagaalladii daroogada tan iyo 2016.
Madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte ayaa maanta ku dhawaaqay inuu ka fariistay siyaasadda.
Dad badan oo dhaleeceeya iyo khubaro siyaasadeed oo ku sugan Filibiin iyo dibaddaba ayaa u arka dhawaaqa Duterte shaki.
Xeeldheerayaasha siyaasadda ee Filibiin iyo dibedda ayaa sheegaya in tallaabada Duterte laga yaabo inay u banneyso hab ay gabadhiisu ugu tartami karto xilka.
Tallaabo la yaab leh oo sii hurisay mala -awaalkii uu ku banneeyey waddada ay madaxtinimadu u maamuli lahayd gabadhiisa, hoggaamiyaha muranka badan ee Filibiin Rodrigo Duterte ayaa maanta ku dhawaaqay inuusan ka qayb geli doonin doorashada 2022 -ka, balse uu gebi ahaanba ka fariisan doono siyaasadda.
Go’aanka Duterte ee ka bixitaanka tartanka ayaa waddada u xaaraya in gabadhiisa Sara Duterte-Carpio ay u tartanto jagada ugu sarreysa dalka.
76-sano jir ah Duterte, oo madaxweyne ka ahaa Filibiin tan iyo 2016-kii, uma qalmo inuu raadsado xilli kale doorashada madaxtinimada ee sannadka soo socda, laakiin wuxuu u tartami karaa madaxweyne ku xigeenka dalka doorashada sannadka soo socda.
In kasta oo xisbigiisa talada haya ee PDP-Laban uu beddelkeeda u magacaabay Duterte jagada madaxweyne-ku-xigeenka, haddana wuxuu ku dhawaaqay Sabtidii inuusan u tartami doonin ku-xigeenka, isagoo sheegay in go'aankan la qaatay iyadoo laga jawaabayo “rabitaanka dadweynaha.”
"Maanta, waxaan ku dhawaaqayaa inaan ka fariistay siyaasadda," ayuu yidhi, isagoo ka soo muuqday Xarunta Doorashada ee caasimadda Manila oo uu weheliyo Senator Christopher 'Bong' Go oo daacad ah, kaas oo ka diiwaangashanaa murashaxa madaxweyne-xigeenka ee xisbiga PDP-Laban.
Dareenka dadka reer Filibiin ayaa ah inaanan u qalmin waxayna xadgudub ku tahay dastuurka in la hareer maro sharciga, ruuxa dastuurka ”si loogu tartamo madaxweyne ku xigeenka, ayuu ku adkeystay.
DuterteGo'aanka ah inuu ka haro tartanka ayaa waddada u xaaraya in gabadhiisa Sara Duterte-Carpio ay u tartanto jagada ugu sarreysa dalka.
Duterte-Carpio ayaa hore u sheegtay inaysan doonayn madaxweynenimada sababta oo ah waxay aabbaheed kula heshiisay in midkood uun ka qaybgalo doorashada qaran ee dhici doonta May 9, 2022. Maqnaanshaha Duterte ee kaadhka codbixinta ayaa haddaba u oggolaan karta inay gasho tartankii.
Dhacdo ahaan, haweeneyda 43 jirka ah waxay aabbaheed ku bedeshay duqa magaalada Davao markii Duterte noqday madaxweynaha Filibiin shan sano ka hor. Waxay sidoo kale soo noqotay madaxa magaalada intii u dhaxaysay 2010 iyo 2013.